၎င်းသည် HTC U11 အတွက်ရနိုင်သောအရောင်သစ်ဖြစ်ပြီးသင်နှစ်သက်မည်။ | Androidsis
ကောင်းပြီ၊ ငါမင်းကိုစောင့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး အကယ်၍ သင်သည် HTC U11 စမတ်ဖုန်းအသစ်၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုအဖြစ်အပျက်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုသင်မြင်တွေ့ပြီးပြီဆိုလျှင်နှစ်ခြင်းခံပြီးသောနှစ်ခြင်းအရောင်ရွေးချယ်မှုကိုသင်အလွန်သဘောကျသည်။ နေရောင်ခြည်နီ သို့မဟုတ် "ဆိုလာနီ" သို့သော်ယခုအချိန်တွင် terminal ကိုအနက်ရောင်၊ ငွေရောင်နှင့်အပြာရင့်ဆုံး (နှင့်ပျင်းစရာကောင်းလျှင်သင်ခွင့်ပြုလျှင်) တွင်သာရနိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဒီပြောင်းလဲပစ်ရန်စတင်နေသည်။
HTC ကုမ္ပဏီက၎င်းကိုကြေငြာခဲ့သည် ဗားရှင်း နေရောင်ခြည်နီ U11 ၏ယနေ့ကြိုတင်မှာယူမှုအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်, အင်္ဂါနေ့, ဇွန် 20, 12:00 pm မှာစတင် ဒေသဆိုင်ရာအချိန်၊ OnePlus ၅ မစတင်မီတွင်အကျိုးသက်ရောက်ပါစေ။
သင်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်ရန်ကံကောင်းသည်ဆိုလျှင်ယနေ့ ၁၂း၀၀ နာရီမှ စတင်၍ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးထုတ်ဝေမှုကိုနေရောင်ခြည်ဖြင့်ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်ကိုသင်သိလိုပေမည်။ နေရောင်ခြည်နီ HTC U11 ၏၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သမျှနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ထင်ရှားပေါ်လာသောအချိန်မှပင်အာရုံခံစားမှုဖြစ်စေသောအရောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး“ နေရောင်ခြည်နီ” သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုထွန်းလင်းစေသည့်ကြယ်မျက်နှာပြင်မှယူထားပုံရသည်။
အတွက်မော်ဒယ်အသစ် နေရောင်ခြည်နီ HTC U11 ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၀ ရက်၊ နေ့လည် (ဒေသစံတော်ချိန်) မှပြုလုပ်လိုသောဖောက်သည်များအားလုံးမှရယူနိုင်သည်။ OnePlus က၎င်း၏နောက်ထပ်“ အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်” ကိုထုတ်ဖော်ပြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည့်နေ့တွင်ပင်ကုမ္ပဏီကဤပစ်လွှတ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, အ OnePlus 5, အဖြစ်မှန်ပေမယ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခံရဖို့ကျန်ရှိနေသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည် အရာရာတိုင်းကိုငါတို့သိတယ် ဒီစမတ်ဖုန်းအသစ်အကြောင်း စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်အမှတ်တံဆိပ်ကိုယ်နှိုက်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အားထုတ်မှုမှမပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း (သို့) အနည်းဆုံး၎င်းသည်၎င်း၏အထင်ကရသစ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောလျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖုံးကွယ်ထားရန်လျှို့ဝှက်ထားရန်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Elvis ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းအိန္ဒိယတွင် OnePlus5နှင့် ပတ်သက်၍ ကြော်ငြာတစ်ခုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည် ဒီမှာ.
HTC မှပြုလုပ်ခဲ့သည့်ခြေလှမ်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ရဲရင့်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်အသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောသတင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူတို့လက်များတွင်ပိုမိုထူးခြားဆန်းသစ်ပြီးမူရင်းပစ္စည်းကိုသယ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားသူများဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ဒီ post ရဲ့အစမှာတိုးတက်နေပြီးသားပါ။ အသစ်အပြီးသတ် နေရောင်ခြည်နီ U11 ၏လျှို့ဝှက်ချက်မရှိပါ။ ၎င်းကုမ္ပဏီသည် Terminal ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုအဖြစ်အပျက်၌ပြသခဲ့သည်မှာအမှန်မှာ၊ Twitter မှ၎င်း၏ကော်ပိုရိတ်ပရိုဖိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သောမက်ဆေ့ခ်ျများစွာ မှနေ၍ အနီရောင်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးနေရောင်ခြည်ဖြင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်မျှော်လင့်ချက်များပိုမိုတိုးပွားလာစေသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်ဇွန်လ ၂၀ ရက်အထိကျန်ရှိသောရက်များကိုသရုပ်ဖော်သည်။
အမှတ်တံဆိပ်သည် HTC U11 စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုပြသသောအခါ၎င်းဖန်သားပြင်အသစ်မည်သို့ပြီးမြောက်ကြောင်းရှင်းပြရန်များစွာကြိုးစားခဲ့သည် သင်ကြည့်ရှုနေသည့်ထောင့်ပေါ် မူတည်၍ အရောင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီ၏ကွဲပြားသောအရိပ်များကိုဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဖြစ်မှန်မှာသူတို့ကဲ့သို့သောအခြားမီဒီယာများမှထောက်ပြသကဲ့သို့ the VergeSamsung ၏ Galaxy S6 ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသော Jewel Tone အရောင်များနှင့်မတူသည်မှာထူးခြားသော်လည်းအနီရောင်မူကွဲမှာမူထူးခြားသည်။ ပတ္တမြား၊ အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အဝါရောင်နှင့်အညိုရောင်အရောင်များကို၎င်း၏ကွေးနေသောကျောဘက်တွင်တွေ့ရသည်.
သတိပေးမှုတစ်ခုအနေနှင့် HTC U11 သည် ၅.၅ လက်မ Quad HD မျက်နှာပြင်ရှိအသုံးပြုသူများထံရောက်ရှိလာပြီးအမြန်ဆုံးနှင့်ထိရောက်သော Qualcomm Snapdragon 5,5 ပရိုဆက်ဆာကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဤလှပသောအပြီးသတ်အပြင်၊ သူ၏ကင်မရာသည်အထူးခြားဆုံးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ရမှတ် ၉၀ ဖြစ်သော DxOMark ရမှတ်အများဆုံးဖြစ်သည်။ သင်သည် HTC U835 အကြောင်းပိုမိုသိလိုပါကလက်မလွတ်ပါနှင့် ဒီ post.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » ဤသည်မှာ HTC U11 အတွက်ရနိုင်သောအရောင်အသစ်ဖြစ်ပြီးသင်နှစ်သက်မည်
Android စက်ပြင် ဟုသူကပြောသည်
Mecânica do android သို့ပြန်သွားပါ
YotaPhone 3: Dual-screen စမတ်ဖုန်းအသစ်သည်ယခင်ကထက်စျေးသက်သက်သာသာသာရှိသည်